ဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စ မလွယ်ကူသေးဟု ကန်သံအမတ် ရှုမြင် | The Stateless Rohingya
Names of Rohingya Villages
22/02/2018 in Rohingya News at Globe: ‘Rohingya blood not cheaper than European blood’
21/02/2018 in Rohingya News at Globe: 100 British MPs for ICC referral for Myanmar’s military
21/02/2018 in NEWS: Rohingya Authors: Rohingya villagers beaten and harassed in Rakhine State
21/02/2018 in Campaigns: Scholars, Activists and Politicians in Germany to hold an International Conference on Myanmar Genocide at the Jewish Museum in Berlin
19/02/2018 in Rohingya Genocide: Myanmar government ‘bulldozing Rohingya mass grave to hide evidence’
19/02/2018 in Press Release: THE ERC’S STATEMENT ON THE INDONESIAN ENVOY TO MYANMAR
Home » Burmese Language » ဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စ မလွယ်ကူသေးဟု ကန်သံအမတ် ရှုမြင်
ဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စ မလွယ်ကူသေးဟု ကန်သံအမတ် ရှုမြင်
Posted on 18/01/2018
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley ကို Greta Van Susteren က နယူးယောက်မှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်း။ ( ဇန်နဝါရီ ၁၇-၂၀၁၈)
By သားညွန့်ဦး / VOA
မန်မာနိုင်ငံကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေးဟာ စိုးရိမ်စရာတွေရှိနေတာမို့ အလွယ်တကူဖြစ်နိုင်ချေမရှိသေးဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley ကပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ အထူးတလည် စောင့်ကြည့်နေသလို၊ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်နေ တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ သံအမတ်ကြီး Nikki Haley ကို ဗွီအိုအေအတွက် Van Susteren က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကို တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
Van Susteren ။ ။ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေး တိုးတက်လာဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ သမ္မတ အိုဘားမားက တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလူထု ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်သြဂုတ်လကတည်းကစလို့ အခြေအနေတရပ် ကြုံလာရပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်က မောင်းထုတ်လို့ လူတသန်းလောက် အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီ ဒုက္ခသည်စခန်းကို ကျမရောက်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ကွဲကွာသွားရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဇတ်လမ်းတွေ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေမှာ ထိတ်လန့်စရာ ရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တကယ့်ကို ထိတ်လန့်စရာ လူသားရပ်တည်မှုအကြပ်အတည်းဆိုးကြီးပါ။ အခု သူတို့အားလုံးဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဒုက္ခသည်စခန်းထဲ ရောက်နေပါပြီ။ ဒီ အကြပ်အတည် အခြေအနေဆိုးကြီးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြစ်စေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဖြစ်စေ တခုခု ဘာလုပ်ဖို့ရှိပါသလဲ။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley။ ။ ဒီကိစ္စဟာ ကျမမြင်ဖူးသမျှတော့ ကြေကွဲဆို့နင့်စရာ အဆိုးဆုံးအခြေအနေတရပ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ အခုဖြစ်နေတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်စုအလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားခံရမှု အဖြစ်အပျက်တစုံလုံးကို ကြည့်ရင် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလှပါတယ်။ ကလေးငယ်တွကို မီးပုံထဲ ပစ်ထည့်တာတို့၊ အမျိုးသမီးတွေ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာတို့၊ မိသားစုလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရတာတို့.. ဒီလိုမျိုး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနှိပ်စက်ခံရပြီး စစ်တပ်ကနေ သူတို့ကို မောင်းထုတ်လို့ အခုဆိုရင် ဒီ ဒုက္ခသည်တွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲ ရောက်လာတာပါ။
Van Susteren ။ ။ အဲတော့ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley။ ။ လုပ်ဆောင်စရာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင်ပဲ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်နဲ့ ကျမတို့ အတူ လုပ်ဆောင်နေ တာရှိပါတယ်။ အဲဒီက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် အထူးကိုယ်စားလှယ်တဦးထားဖို့ အတွင်းရေးမှုးချုပ်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေပြီ ထင်ပါတယ်။ ကျမတို့အနေနဲ့ စစ်တပ်ကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိအားတွေ ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျမတို့ မြင်ချင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိမရှိဆိုတာတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Van Susteren ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ဒေသမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို သတင်းရေးသားဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ရိုက်တာသ တင်းသမားနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ သူတို့ကို မိသားစုတွေ ရှေ့နေရှေ့ရပ်နဲ့ အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ ပေးမတွေ့ပဲ ထိမ်းသိမ်းထားတာပါ။ ဒီ ရိုက်တာ သတင်းသမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရော ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အမေရိကန်က ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ သူတို့ကတော့ ဒီ အကြပ်အတည်းကြီးကို သတင်းယူဖို့ကြိုးစားရင်း ဖမ်းခံရတာပါ။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley။ ။ ကျမတို့လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီ သတင်းထောက်တွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျမတို့ အတော်လေး အလေးထားပါတယ်။ ကျမတို့တင်မကဘူး တကမ္ဘာလုံးကပါ သူတို့ကို စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ သူတို့သိပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်က လုံးဝ စိတ်ပျက်စရာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ နှစ်အတန်ကြာကတည်းက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်၊ ဒါကို ဆက်ပြီး ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Van Susteren ။ ။ စစ်တပ်အပေါ် အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေ ထပ်လုပ်ဖို့ ရှိပါသလား။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley။ ။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရကိုဖြစ်စေ စစ်တပ်ကိုဖြစ်စေ ဆက်ဆံရေးမှာ ပျော့ပြောင်းနေဖို့ မလိုပါဘူး။ သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံဖို့လိုပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် လုံခြုံဘေးကင်းတဲ့နေရာတခု လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွအနေနဲ့က သူတို့နေရပ်ကို ပြန်ဖို့အင်မတန်ကြောက်ရွံနေတဲ့အခါကျတော့ နေရပ်ပြန်ရေး အစီအစဉ်တွေက အလွယ်တကူတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ခုထိတိုင်အောင် ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ ဖွယ်စရာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်တွေ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ဆောင်စရာအတော်များများရှိပါတယ်။
Van Susteren ။ ။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းတခုပါ။ သံအမတ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တာ တနှစ်ရှိပြီနော်။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။
Van Susteren ။ ။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး တာဝန်ယူရတဲ့အပေါ် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley။ ။ ဒါဟာ တကယ့်ကို ကြီးလေးတဲ့ တာဝန်ပါ။ ဒီလို တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ထမ်းရတဲ့အပေါ် ဂုဏ်ယူ ကျေနပ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ထမ်းပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ဘေးကင်းငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ တကယ့်ကို ဂုဏ်ယူကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။
Van Susteren ။ ။ အားမလို အားမရဖြစ်စရာ အခြေအနေရောရှိလား။ ကျမဆိုလိုတာက မြန်မာနိုင်ငံလိုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ ငါတခုခုလုပ်ပေးခဲ့ရရင် ဆိုပြီး မဖြစ်မိဘူးလား။ ဒီလို ပြဿနာအကြပ်အတည်းတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ဘာမှလည်း လုပ်ခွင့်မသာသေးတဲ့အခြေအနေဟာ သံအမတ်တွေအတွက် အတော်ခက်ခဲမယ်ထင်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley။ ။ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံမှာ လူအတော်များများ အခုလို ခံစားနေရာကို ကြည့်နေရတာ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းလို့ ထင်တယ်။ ဒါကို တခုခု လုပ်ပေးလိုက်ချင်တယ် ဒါပေမယ့်လည်း အချိန်တိုတိုအတွင်း လုပ်လို့မရဘူး။ ဒါဟာ တကယ့်ကို အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေပါ။
ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် Van Susteren ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သံအမတ်ကြီးရှင်
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley။ ။ ကျမကလည်း ကျေးဇူးပါ
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Nikki Haley ကို Van Susteren ကဗွီအိုအေ အတွက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
✪ Latest Posts»
‘Rohingya blood not cheaper than European blood’
100 British MPs for ICC referral for Myanmar’s military
Rohingya villagers beaten and harassed in Rakhine State
Scholars, Activists and Politicians in Germany to hold an International Conference on Myanmar Genocide at the Jewish Museum in Berlin
Myanmar government ‘bulldozing Rohingya mass grave to hide evidence’
THE ERC’S STATEMENT ON THE INDONESIAN ENVOY TO MYANMAR
Bangladesh: The crisis is not over – Rohingya refugees are still arriving
Maung Zarni: Myanmar feels likeabig cage for Rohingyas
Myanmar: EP delegation calls for enquiry into human rights violations
Bangladesh hands list to Myanmar for Rohingya repatriation
✿Article: Rohingya Author»
U Ko Ni – Man of mountains of knowledge on Myanmar Constitutional Reforms
Aung San Suu Kyi, Bill Richardson: OnceaFriend always not beaFriend
What’s the UN doing to Stopping Genocide of the Rohingyas of Myanmar?
Should the Rohingya Return to Myanmar?
Aung San Suu Kyi escapes withabouncing cheque
နိုဝင်ဘာ(၁၇) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Park Royal Hotel ၌ ပြုလုပ်သည့် ရခိုင်အရေးနှင့် လုံခြုံရေးအမြင် ဟောပြောပွဲမှ ဦးရဲထွဋ်၏ ပြောကြားချက်များကို ချေပခြင်း
Ignore the Rohingya at our peril
CALL IT GENOCIDE
The Lady is no champ
✎ Archives Select Month February 2018 (30) January 2018 (39) December 2017 (30) November 2017 (41) October 2017 (43) September 2017 (33) August 2017 (53) July 2017 (31) June 2017 (36) May 2017 (59) April 2017 (31) March 2017 (61) February 2017 (37) January 2017 (32) December 2016 (77) November 2016 (83) October 2016 (87) September 2016 (42) August 2016 (41) July 2016 (52) June 2016 (50) May 2016 (53) April 2016 (54) March 2016 (51) February 2016 (30) January 2016 (36) December 2015 (33) November 2015 (48) October 2015 (52) September 2015 (25) August 2015 (48) July 2015 (32) June 2015 (44) May 2015 (30) April 2015 (11) March 2015 (11) February 2015 (14) January 2015 (22) December 2014 (28) November 2014 (35) October 2014 (54) September 2014 (21) August 2014 (32) July 2014 (31) June 2014 (17) May 2014 (54) April 2014 (73) March 2014 (70) February 2014 (61) January 2014 (89) December 2013 (72) November 2013 (72) October 2013 (62) September 2013 (84) August 2013 (72) July 2013 (106) June 2013 (80) May 2013 (100) April 2013 (124) March 2013 (121) February 2013 (110) January 2013 (115) December 2012 (99) November 2012 (134) October 2012 (138) September 2012 (155) August 2012 (211) July 2012 (193) June 2012 (143) May 2012 (104) April 2012 (81) March 2012 (54) February 2012 (63) January 2012 (75) December 2011 (42) November 2011 (15) October 2011 (15) September 2011 (30) August 2011 (37) July 2011 (19) February 2011 (1) January 2011 (1) September 2010 (1) August 2010 (1) May 2010 (1) January 2010 (2) December 2009 (1) October 2006 (1) September 2006 (1) January 2004 (1)
✔Connect with us on Facebook
✿News in Pictures»
My New Year Reflection and Counsels
POEM: “I don’t know why” saysaRohingya
Humanity cries bloody tears
“I am Rohingya in the Mirror”
A Heart Turns
Anonymous on Nobel Laureate Mairead Maguire Calls for UN and International Community to End Burmese Repression Against Rohingya Muslims
Anonymous on রোহিঙা দোকানমালিকরা তাদের মংডূ মার্কেটের দোকানে ক্ষতির সম্মুখীন
Anonymous on U.S. Ambassador in Myanmar Speaks Out on Rohingya
Anonymous on UN chief hails Myanmar panel to probe violence
mehedi on Bringing Myanmar killers to justice tops summit agenda
The Stateless Rohingya © 2015. All Rights Reserved.